ukwenza izinkukhu zokudla kwezinkukhu epulazini lezinkukhu
Abanye abalimi bezinkukhu bajwayele ukondla izinkukhu ngezinhlamvu ezingavuthiwe ezifana nommbila, amabele, umunyu, njll. Lokhu akukhona nje ukunciphisa ukusetshenziswa kokuphakelayo kepha futhi kulimaza izinkukhu.izodala ukuthi kudliwe ukudla okuningi.Akukho okusanhlamvu okugayiwe okulula futhi okusindisa, yonga imali kepha izinga lokusebenzisa okuphakelayo lincane. Ngoba izinkukhu azinamazinyo futhi zigwinye ngaphandle kokuhlafuna, yayo enamathumbu amafushane.Chickens ukudla okudliwayo kuzohlala emathunjini isikhashana nje 4 amahora, Kunzima ukugaya ngokugcwele nokumunca,imfucuza engaka yokudla. Ngoba izinkukhu zimane zondliwa ngohlobo oluthile lokusanhlamvu okuluhlaza, izinhlobo zazo azizwisisi futhi izakhi zazo aziphelele. Ukondla isikhathi eside kuzoba nomthelela ekukhuleni nasekukhuphukeni kwenkukhu.Ukuphakela izinkukhu ukudla okusanhlamvu okuluhlaza kunamazinga aphansi okugaya ukudla kanye nokudla okungaphelele, okuholela ekukhuleni kabi kwamachwane wezingane,ukukhula kancane kwama-broilers,ukukhiqizwa kwamaqanda aphansi, kanye nokusebenza kahle kwezomnotho okuphansi. Indlela lengiyo yekuphakela kugaya okusanhlamvu okuluhlaza okufana nokolweni,ukolweni ku-powder bese wenza ezinye izinto ezifana ne-bran, ikhekhe likabhontshisi, isidlo sezinhlanzi, ukudla kwamathambo, ukudla kwamatshe, njll, bese ukondla inkukhu.
Amathole ezinsana adinga amandla amaningi nezidingo zamaphrotheni eziphakeme. Ezilinganisweni ezijwayelekile, okusanhlamvu (ukolweni, irayisi ephukile, njll.) ngu-50-60%, i-bran (ilayisi, ukolweni bran, njll.) kuyinto 5-10%; amakhekhe kawoyela (ikhekhe likapheya, ikhekhe likabhontshisi, ikhekhe le-sesame, njll.) kukhona 20-25%; ukudla kwezilwane (isidlo sezinhlanzi, isidlo senyama, njll.) kuyinto 7-20%; ukudla kwamathambo, igobolondo 4-5%; usawoti wethebula 0.3-0.5%. Okuphakelayo okuluhlaza kuphekelwa ngokungeziwe, ikakhulukazi uma kungekho-vithamini okwengeza, okuphakelayo okuluhlaza akukwazi ukondliwa, futhi inani lokuphakelayo limayelana 30-50% kokuphakelayo okugxile.
Ukubeka izinkukhu kudinga izinga elithile lamaprotheni namaminerali ukuze kukhiqizwe lawo maqanda usuku nosuku. Abanakho okuningi ngendlela yokubhuka. Ukwenza igobolondo, kufanele aqale athathe i-calcium ekudleni kwakhe, ishutheke emathanjeni akhe, bese uyikhipha kulawo mathambo.the.Iqanda elimhlophe licishe libe amaprotheni amsulwa, futhi ngakho-ke udinga ukudla ngokuqinile amaprotheni ukuze awukhiphe ngendlela yeqanda.
Ukuze ukhuthaze ukukhula okujwayelekile kwama-broilers, vikela izifo, khuphula isivuno kanye nokusebenza kahle kwezomnotho,I-pellet yokudla kufanele ingeze ama-amino acid, amavithamini, ukulandelela izinto, imithi elwa namagciwane, antioxidants, isikhunta, Ama-enzyme nama-colorants ukwenza ngcono i-broiler ekhula.I-Additives kufanele ihlanganiswe ngokuphelele futhi ihlanganiswe kokuphakelayo.Uhlobo nenani lokungezwa kufanele kunqunywe ngokuya ngezidingo zangempela, njengokudla okuningi okuphakelayo, Izakhi zamavithamini nezomkhondo aziphelele, kufanele unake ukungezelela ingxenye efanelekile yamavithamini ahlukahlukene nokulandelela izithasiselo, Imvula yasehlobo ivame ukungeza ama-anti -ypew agents kanye nama-antioxidants.